Ummeli nje waseJamani e-China usweleke ngesiquphe: Uphando
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » Ummeli nje waseJamani e-China usweleke ngesiquphe: Uphando
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Wayefungiswa njenge-Ammeli yaseJamani yamva nje nge-24 ka-Agasti, kwaye esaziwa njengesandla sasekunene kwiKhansela yaseJamani uMerkel. Kutheni wasweleka namhlanje? Abasemagunyeni baseJamani bathi cwaka malunga neemeko, ngenxa yophando olulindiweyo.
UJan Hecker, ongummeli wase-China osandula ukumiselwa e-China usweleke ngoMvulo kusasa eBeijing
Iimeko zedisas zakhe zigcinwa ziyimfihlo ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ziphandwa nguMphathiswa Wezangaphandle waseJamani
U-Ambassador Hecker wonyulwa nge-24 ka-Agasti, eshiya inkosikazi yakhe kunye nabantwana abathathu emva kokuba esweleke namhlanje eneminyaka eyi-54.
wayehleli kuphela kwindima yoonozakuzaku iintsuku ezimbalwa. Umntu oneminyaka engama-54 ubudala wayesebenza njengomcebisi womgaqo-nkqubo wezangaphandle kwiKhansela yaseJamani u-Angela Merkel.
Unozakuzaku u-Hecker wachongwa kuphela ukuphela kuka-Agasti. Wayeneminyaka engama-54 ubudala kwaye washiya umfazi nabantwana abathathu.
Ummeli wase-China e-China wayengomnye wabona bantu babezithemba kakhulu kunye nabacebisi bezokhuseleko kuzwelonke ukuba bashiye i-Chancellor yase-Germany u-Angela Merkel.
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, wabonwa ebonisa ubumbano kunye nomlingane wakhe waseLithuania.
"Kulusizi olukhulu kwaye sidanile ukuba sive ngokusweleka ngesiquphe kwe-Ambassia yase-China e-China," utshilo uMphathiswa Wezangaphandle waseJamani kwingxelo ngoMvulo.
"Iingcinga zethu ngalo mzuzu zikunye nosapho kunye nabantu ababesondele kuye."
IOfisi yamanye amazwe yaseJamani ayizichazanga iimeko zokubhubha koonozakuzaku.
Umnumzana Hecker usebenze njengegqwetha kunye nejaji ngaphambili.
Wadibana noMongameli Biden kunye Chancellor Merkel kwi-G7.
Hecker wabonakala “Wonwabile kwaye kulungile” Ngexesha lomsitho awayewubambe kwikhaya lakhe eBeijing ngoLwesihlanu ophelileyo, enye yeendwendwe yaxelela iarhente yeendaba iReuters.
Ngelixa besazisa i-Ambassador yabo ye-14 e-China, umzi wommeli wase-Jamani uthe eyona njongo yakhe ibikukuqinisekisa “ukukhula kwexesha elide kunye nozinzo kubudlelwane be-Germany ne-China… ngokunceda abantu bamazwe omabini.”
Kuthiwa wayecwangcise ukubuyela eJamani kwaye aqhubeke nokusebenza ne-chancellar de kuphele ixesha lakhe. Nangona kunjalo, ngenxa ye "imeko yozakuzo" esandula ukubanzima, enxulumene nokuthathwa kweTaliban iAfghanistan, urhulumente wobumbano uthathe isigqibo sokuba "I-Embassy yaseJamani eBeijing kufuneka iqinisekise ukuba isebenza kakuhle. IJamani yamyalela ukuba ahlale eBeijing.
Iimbadada iSiseko uMmo omkhulu! Inc. Ukudala Uncumo
Oosomashishini base-Uganda Grasshopper ngoku abafane bangabikho...